Ngathi | Iimveliso ze-Hebei Da Shang Wire Mesh Co, Ltd.
Hebei Da Shang wocingo Iimveliso Co., Ltd. ibekwe Anping County, kwiPhondo Hebei, i umenzi ngokukodwa imveliso ye wocingo. Okwangoku, sineeworkshops ezimbini zokuvelisa (ivenkile yocweyo yemveliso yocingo lwentsimbi kunye neworkshop eyenziwe ngocingo lwentsimbi), kunye neeseti ezingaphezu kwe-100 zemingxunya kunye nezixhobo zokuvavanya imveliso, i-80% yazo ngoomatshini be-CNC abanezinga eliphezulu lokuzenzekelayo kunye nobuchwephesha obuphambili , kunye nokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeemveliso.
Iimveliso zethu eziphambili intsimbi ephothiweyo womluki wocingo, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS410, SS410L ， SS430), ephantsi carbon intsimbi wocingo, ucingo lobhedu, umnatha wocingo, phosphor yobhedu wocingo, umnxeba wocingo umnxeba, monel ucingo umnatha njl. Ezona ntlobo ziphambili zokuluka zicacile iimfuno zomthengi.
Ukuveliswa kwamandla amatsha:
Umnxeba wocingo we-Nickel usetyenziselwa ikakhulu ukuveliswa kwamandla ombane, ngakumbi i-electrolysis.
-Iindlela ezintathu zokuguqula izinto:
Ngaphezulu kweemitha ezili-1000 ubude zentsimbi ekhethekileyo yocingo lwezinto ezisetyenzisiweyo zisetyenziselwa iindlela ezintathu zokuguqula izinto.
Icandelo lokucoca ulwelo:
I-epoxy camera wire mesh njengoluhlu lwenkxaso ye-hydraulic filter element ilunge ngakumbi kwindalo kwaye inezoqoqosho.
-Ingcinezelo yeLeaf Filter Elements:
Stainless mesh square isikwere kunye dutch ephothiweyo wocingo zisetyenziselwa vane lokucoca ulwelo. Izinto eziphambili ziyi-304316l, 316L, 904L, njl. Zinokubonelelwa ngekhoyili okanye ngokweemfuno zabathengi.
Umbhobho wokulawula isanti:
Insimbi yesikwere yocingo lwesinyithi kunye ne-dutch ephothiweyo yocingo isetyenziselwa umbhobho wokulawula isanti. Ngokuya ngesoftware yethu ephuhliswe ngokwakho, sinokuyila iinkcukacha zemingxunya.
Wocingo Square isetyenziselwa ukupakisha yakhiwe, ubude kunokuba ukuya kwiimitha ezili-1000, kwaye kwakhona ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabathengi.
I-DS yi-ISO9001-2008 eqinisekisiweyo, kwaye inenkqubo efanelekileyo yolawulo lomgangatho. Kwinkqubo yokuvelisa, izinto ezintlanu eziphambili ezichaphazela umgangatho wemveliso, kubandakanya umntu, umatshini, izinto, indlela kunye nokusingqongileyo, zilawulwa ngokungqongqo kwaye ziqhutywa kwikhonkco ngalinye lemveliso. Umgangatho wemveliso uyahlangabezana nemigangatho yamanye amazwe. I-DS inyanzelisa ukuba "ilaphu elilungileyo locingo liyakwazi ukuthetha kwaye umnatha ngamnye kufanelekile". Sicinga ukuba uhlalutyo lweziqulatho zeekhemikhali, iipropathi ezibonakalayo kunye nolawulo lokunyamezelana zibalulekile kwaye zinceda ilaphu lethu locingo ukubonisa ukusebenza kwabo kakuhle ekusebenzeni komthengi nakwiimeko ezinzima zokusebenza.
Inkampani Inkcubeko Of Hebei Da Shang wocingo
Gxila ekuhlangabezaneni nabathengi kwiimfuno zabathengi ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu, babe yeyona nkampani inefuthe kwaye ibaluleke kakhulu kwinkampani yocingo ekhaya nakumazwe aphesheya
Qhubeka usebenza nzima-yenza amathuba kubathengi
Ukuqhubeka kwezinto ezintsha zetekhnoloji kunye nokuphuculwa kweenkonzo ukuphucula ukhuphiswano lwamashishini
Abasebenzi abasekwe- Yenza ixabiso kubathengi nakwiinkampani ngokukhetha nokuqeqesha abasebenzi abagqwesileyo
Ngokusekwe kwinkampani nakwiinjineli zethu, zikhokela kwiimfuno zabathengi, zidibanisa nophuhliso oluqhubekayo lweemveliso kunye neetekhnoloji, i-Hebei Da Shang Wire Mesh iyaqhubeka nokuphucula usetyenziso lwezixhobo kwiinkalo ezinxulumene noko. Ngeli xesha, u-Hebei Da Shang wocingo wenza uqeqesho rhoqo kubasebenzi bethu, esenza iintlanganiso zobuchwephesha rhoqo namaqabane ethu, ngokuqhubekayo ukuphucula izakhono zobuqu zenkampani kunye nokuphucula ubudlelwane nentsebenziswano namaqabane. Ukuhamba ngale nkqubo, u-Hebei Da Shang Wire Mesh unokuphucula inkonzo kubathengi ngokuqhubekayo.
I-DS izinikele ekukhonzeni abathengi njengesiseko, ukuhlangabezana neemfuno eziqhubekayo zabathengi, ukunceda abathengi ukuba banciphise iindleko, kwaye babonelele ngowona mgangatho uphezulu, inkonzo, kunye nexabiso elikhuphisanayo. / 7521333. Umnatha wocingo we-DS uhlala ekwinkonzo yakho.